Shabaabul Mujaahidiin oo jihooyin kala duwan weeraro kaga qaaday Jaalle Siyaad iyo Madaafiic saaka meel dhaw lagaga duqeeyay Xeradaasi. | Halganka Online
Shabaabul Mujaahidiin oo jihooyin kala duwan weeraro kaga qaaday Jaalle Siyaad iyo Madaafiic saaka meel dhaw lagaga duqeeyay Xeradaasi.
Xilli ay dagaal ku qaadeen Ciidamo katirsan Shabaabul Mujaahidin fariisinka ay Kuliyaddii hore ee ciidanka ku leeyihiin Burundeeska ayaa hadane duqeymo culus lagu beegsaday xarunta, iyadoona dagaal xoog leh halkaasi uu labada dhinac ku dhexmaray. Ciidamada Al-Shabaab ayaa saaka weerarka ka qaaday aagag ku dhaw Xaruntaasi oo xalay ay ku hoyadeen kadib dagaal ay fiidnimadii ku qaadeen Xarunta, waxaana saaka si ba’an loola dhacay xerada Ciidamada Burundi madaafiic hoobiyeyaal ah.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meel aad ugu dhaw lagaga duqeynayay hoobiyaha taasi oo dhalin karta khasaaro xaqiiqsan oo kaso gaaraya Ciidamada halkaasi ku jira, laakin sidaasi oo ay tahay marnaba lama ogaado khasaaraha rasmiga ah ee dagaallada kusoo gaara ciidanka la baxay AMISOM.
Saraakiil katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkii xalay iyo kan saaka hal qorshe uu yahay isla markaana ay jiraan olole lagu wiiqayo ciidamada Burundi ee ku xareysan Kuliyadda Jaalle Siyaad, waxaana marar badan xaruntaasi ay la kulantay weeraro caynkaasi ah.
Maleeshiyaad katirsan kuwa xukuumadda Shariif ee ku sugan agagaaraha Kuliyadda Jaalle Siyaad ayaa saaka dagaalka soo galay iyagoo culeyska ka fududeynaya Ciidanka Burundi, laakin lama sheegi karo khasaaraha iyana halkaasi kuso gaaray waxaana xaalku uu hadda yahay mid degan.
« Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa shalay galab maamul cusub u magacawday gobolka Galgaduud ee bartamaha Dalka Soomaaliya. Wilayada Gobolka Sh.Hoose oo soo saaray Amaro ku aadan Iskuuladda »